Tani waa taariikhda Muraayadaha Aviator, oo ah kuwa ugu caansan adduunka! - THE INDIAN FACE
Xaqiiqdii waad maqashay wax ku saabsan kuwa caanka ah muraayadaha duuliyaha! Mid ka mid ah muraayadaha ugu caansan taariikhda. Shaki la'aan waad aragtay mararka qaarkood, maxaa yeelay way aad u fiican yihiin runtiina waxay tahay inay ku dhow yihiin "waa waajib" adduunka gafas de sol.
ka muraayadaha duuliyaha ama "duuliyaha”, Sida la ogsoon yahayna, waxaa lagu kala soocaa iyadoo lagu ballaadhsan yahay biraha qafiifka ah ee birta ah, oo aad loogu garan karo naqshadeeda iyadoo leh buundo laba-geesood ah oo ku habboon qalooca sanka, kaas oo muraayadaha indhaha ku haya qaab ilmo ah, taas oo siinaysa qaabkeeda gaarka ah. .
Laakiin runtu waxay tahay mid ka mid ah kuwa ugu khaaska ah ee lagu garto muraayadaha duuliyaha Waa habka ay nashqadeheeda iyo cabirkeeduba gabi ahaanba isha u daboolaan si loo damaanad qaado ilaalinta ugu badan ee ka hortagga ileyska qorraxda, iyadoo la adeegsanayo muraayadaha indhaha oo gabi ahaanba mugdi ah ama ka tarjumaya. Waana taas muraayadaha duuliyaha iyaga ayaa loo abuuray gaar ahaan ujeedkan!
Miyaad horeyba u taqaanay taariikhda muraayadaha duuliyaha? Sii wad aqrinta oo ka ogow waxyaabaha xiisaha leh ee ay muraayadaha indha-sarcaadka ah ee qariya ay qarinayaan oo aan ka maqnaan karin ururintaada.
Waa maxay asalka Aviator Muraayadaha?
ka muraayadaha duuliyaha Waxay ku leeyihiin bilowgooda iyo magacooda Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Xilligan taariikhiga ah ayaa soo ifbaxay baahida loo qabo in la soo saaro muraayado gaar ah oo inta badan la siiyo duuliyeyaasha duulimaadyada, iyo sidoo kale xubno ka tirsan Ciidamada Badda iyo Badda ee Mareykanka. Halkaas ayey ka soo baxday magaca wakiilkiisu: "Aviator" ee loogu talagalay duuliyaasha USAAAC (United States Army Air Corp.)
Asalka ah muraayadaha duuliyahaayaa aad uga xiiso badan! Waxay ka bilaabmaysaa 30-meeyadii markii ay Ciidanka Cirka u wakiisheen soo saaraha alaabada indhaha Bausch & Lomb hawsha abuurista iyo naqshadaynta muraayadaha muraayadaha ee sida gaarka ah loogu talagalay inay ka ilaaliyaan duuliyeyaasha falaaraha qorraxda hawlgalladooda, taas oo ay Waxay ku sugnaayeen joog aad u sareeya oo si aad ah ugu xoog badnaa shucaaca iyo iftiinka xad dhaafka ah. Sidaa awgeed, shirkaddu ma joogsan illaa ay ka gaadhay caankii muraayadaha duuliyaha.
Ayaa ikhtiraacay Muraayadaha Aviator?
Waxay ahayd 1936-kii in Bausch + Lomb uu u sameeyay muraayadihii ugu horreeyay ee Ray-Ban loogu talagalay duuliyayaasha militariga oo bilaabay suuq geyn sanad kadib. Dhakhaatiirta indhaha ee shirkadda iyo fiisikisyadu waxay ku guuleysteen inay soo helaan midab khaas ah sanadkii 1936, oo ah midab cagaar mugdi ah oo awood u leh inuu nuugo nalka kooxda huruudda ah ee muuqaalka, isla markaana leh qaab aad u ballaaran oo la jaan qaadaya labo kristantar weyn oo aad u daboolan indhaha si fiican (waana sababtaas darteed waxay gaadheen dhabannada), wax yar ayay u janjeeraan si aanay u carqaladeyn aragtidiisa ku saabsan kontaroolada diyaaradaha ama araggiisa hawada.
In kasta oo aan ka heli karno moodello badan oo ku dayasho iyo is-waafajinta cusub ee suuqa maanta, tani dhab ahaantii waxay ahayd asalka astaanta Ray-Ban, abuuraha asalka ah ee tusaalaha muraayadaha duuliyaha, oo ay heleen duuliyeyaasha Ciidamada Cirka ee Mareykanka oo bilaash ah si loogu isticmaalo dagaalka.
Muxuu muraayadaha duuliyuhu caan u yihiin?
ka muraayadaha duuliyaha Waxay caan ku ahaayeen Dagaalkii Labaad ee Adduunka mahadnaq General Douglas MacArthur, 1944, oo lagu qabtay sawir muuqaal ah oo xiran muraayadaha aviator-ka.
Markii dambe, 1947, shirkaddu waxay si rasmi ah u horumarisay muraayadaha indhaha ee la aqoonsan yahay oo ah agabka moodada ee loogu talagalay dadweynaha iyada oo la adeegsanayo ololeyaal xayeysiis ah (oo loogu talagalay ragga iyo dumarka labadaba) oo la xidhiidha gaar ahaan waddaniyadda iyo hanka qaran ee kor u kacayay wakhtigaas, in kasta oo Waxay sidoo kale si weyn u kobciyeen horumarada tikniyoolajiyadeed ee waqtigaas iyo faa'iidooyinkooda caqliga leh (shaqeynta iyo raaxada). Xitaa waxay u adeegsadeen shaxdii duuliyihii Amelia Earhart inay tahay sawir ka mid ah olalahoodii olole ee ay kula xiriireen dumarka bulshada leh firfircoonaan waddaniyeed.
Dabcan, boorkan ayaa damaanad qaaday iibsiyo badan oo astaanta ah wuxuuna sidoo kale ka dhigay muraayadaha muunad guul bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo xilligaas, iyo ilaa dhamaadka waqtiga. Waxay sidoo kale ahayd muraayadaha muraayadaha oo lagu suuq geeyay fikradda farxadda iyo midnimada qoyska in kasta oo xilliyadii dagaalku jireen, iyagoo soo jiitay indha badan oo dadwaynaha ah oo leh hal ku dhigyo ay ka mid yihiin "Xubnaha berrito waxay u baahan yihiin indho wanaagsan."
ka muraayadaha duuliyahaMa aysan haysan dhagaystayaal gaar ah, waxay u ahayd qof walba, sidaa darteedna caannimadooda; Waxay u isticmaali karaan dhalinyarada ilaa dadka waaweyn, waxaana isticmaali jiray rag iyo dumarba, taas oo waliba sabab u ahayd caan bixintooda.
Maanta, tusaalaha ah muraayadaha duuliyaha wuu yimaadaa wuuna tagaa xilli ahaan. Xaqiiqdii waad ogaatay sida qaabkani had iyo jeer ugu soo laabto hirarka moodada guridda iyo dib u noqoshada. Laakiin runtu waxay tahay inay tahay muraayadaha muraayadaha indhaha ee halista ah ee halkan ku sii jiraya. In kasta oo abuurayaasheeda asalka ah Bausch + Lomb ay aakhirkii ka iibiyeen sumadda Ray-Ban shirkadda Talyaaniga ah ee Luxótica sanadkii 1999, haddana astaanta ayaa weli ah abuuraha rasmiga ah ee muraayadan aviator astaamaha ah.
Noocyo kale oo badan (naqshadeeye iyo waliba qiimo jaban) ayaa qaatay qaabkan asalka ah oo suuq galiyay sanado badan iyagoo dib u turjumaya qaabeynta muraayadaha duuliyaha oo leh midabbo kala duwan, looxyo, kiristaalo, iyo cabbirro kala duwan. Markaa ma aha wax aan caadi ahayn in la arko dad badan oo qaabkan u xidhan qaab gaar ah oo ka duwan, laakiin ilaalinaaya asal ahaan.
Waa sidaas muraayadaha duuliyaha Waxay sidoo kale noqdeen kuwa caan ku ah kasoo muuqashadooda filimada sida “jilbiska"Iyo"Top Gun”, Waxaa jilaya Sylvester Stallone iyo Tom Cruise siday u kala horreeyaan, iyo waliba sida ay caan ugu yihiin fannaaniinta sida Paul McCartney, Brad Pitt, Freddy Mercury, Steve McQueen, David Bowie, Elvis iyo Diana Ross, iyo kuwo kale oo badan.
Shaki kuma jiro taas muraayadaha duuliyaha waxay noqdeen astaan ​​dhaqameed taariikhda moodada iyo muraayadaha indhaha!
Waa wax la yaab leh oo lagu kalsoonaan karo in tusaale u ah gafas de sol aad u faa'iido badan oo dhab ah markaa, mahadnaqa horumarka farsamada iyo xallinta dhibaatooyinka xilliyada dhibaatooyinka. Adigana, maxaad u maleysay sheekada weyn ee ka dambeysa muraayadaha duuliyaha?
10 waxyaabood oo ku saabsan dabaqyada waa inaad ogaataa
Marka lagu Darey Muraayadaha Muraayadaha: Waxa iska cad oo aan ahayn waqtiyo aad u cad in la xidho muraayadaha qorraxda
Ma u xiran yihiin muraayadaha muraayadaha indhaha si sax ah? Mararka qaarkood waxay u muuqan kartaa "wax iska cad" goorta la xidho ama aan loo xidhin muraayadaha indhaha. Mararka qaarna waxay umuuqataa wax muuqda in lagu ogaado jaleeca iftiinka muraayadaha indhaha ugu badan
Muraayadaha Isboortiga ee Daawooyinka la qoro
Hadaad ku tabobarto isboorti bannaanka iyo orodada sida orodka, socodka, orodka, baaskiil wadida, orodka iyo inbadan, waxaad sifiican u ogaataa in aragtidaada ay kamid tahay qalabkaaga ugu qiimaha badan.
Muraayado baraf leh, xulo ugu fiican kaliya 3 talaabo
Haddii aad galayso adduunka barafka barafka ah, ama aad rabto inaad ku beddesho muraayadahaagii hore kuwa wanaagsan, waxaan haysannaa qaaciddada ugu fiican ee aad ku dooran karto si wanaagsan marka xigta ee aad iibsanaysid g
Xirashada muraayadaha indhaha waa muhiim marka aan ku tababbarayno isboortiga nooc kasta oo uu yahay. Nala baro qaar
Dhab ahaantii diyaar ma u tahay inaad ka adkaato khataraha dabeecadda marka aad baraf ku tahay? Soo ogow 5-ta daqiiqadood ee ugu muhiimsan ee aad ku qancin doonto xirashada goggles-ka ugu wanaagsan!
Adduunyo aan lahayn muraayadaha indhaha ama muraayadaha indhaha la mid ah dareen isku mid ma ahan. Awoodda muuqaalka iyo ilaalinta ay na siinayaan waa mid aan xad lahayn marka aan isticmaaleyno muraayadaha saxda ah. Waxbadan ka ogow wax ku saabsan h
Haddii aad shaki ka qabtid muraayadaha noocan ah, oo aad ka fiirsaneyso inaad ku guuleysato, ka aqriso, oo aad ogaatid faa iidooyinka badan ee labbiska muraayadaha indhaha ee galaaska. polarxardhay.